မမေးလည်းဖြေ ၁၇- အစ္စလာမ်က အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားဖောက် သာသနာပြုခိုင်း ထားတယ်တဲ့လား? - News @ M-Media
မမေးလည်းဖြေ ၁၇- အစ္စလာမ်က အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားဖောက် သာသနာပြုခိုင်း ထားတယ်တဲ့လား?
in Media To Monitor — April 18, 2013
ဧပြီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၃
အစ္စလာမ်သာသနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှိုင်းတိုက်ဝါဒဖြန့်ကြသည့် စွပ်စွဲချက်တစ်ရပ်မှာမွတ်စလင်မ်များက ၇၈၆ ကိန်းဂဏန်းအား အသုံးပြုကြခြင်းသည် ၂၁ရာစုတွင် အစ္စလာမ်သာသနာ မြန်မာတွင်လွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်ပြီးထိုသို့ဖြစ်လာစေရန် အကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့် ဘာသာခြား တိုင်းရင်းသူတို့အား သိမ်းသွင်းဖြားယောင်း လက်ထပ်ကြကာ မယားအများအပြားယူလျက် သားဖောက်သာသနာပြုကြရန် အစ္စလာမ်သာသနာက ညွှန်ကြားထားကြောင်း၊လက်တွေ့ အကောင် အထည်ဖော်ကြသူများအား တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီး၏ အဆင့်အတန်းအလိုက် ထောက်ပံ့ဆုကြေးများကို ဗလီများမှတဆင့် ချီးမြှင့်ကြကြောင်း အစရှိသည့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သောစွပ်စွဲချက်ဖြစ်သည်။ တရားဟောစင်မြင့်ထက်မှ အသံချဲ့စက်သုံးကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မတရား ဟောခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ DVDခွေများ ဖြန့်ဝေရောင်းချဖွင့်ကြခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းများ ယခင်ကလက်သိပ်ထိုးအဆင့်မှ ယခုအခါ ပေါ်ပေါ် ထင်ထင်ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှလည်းကောင်း၊ တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နား၊ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြား ကြရခြင်းဖြင့် လည်းကောင်းနေရာမျိုးစုံ ကဏ္ဍစုံမှ ဝေဝေဆာဆာ ဝါဒမှိုင်းတိုက်ကြလျက်ရှိရာ ထိုစွပ်စွဲချက်ကို စူးစမ်းဆင်ခြင်ခြင်း မပြုကြတော့ဘဲအမှန်ဟု ထင်မြင်မှတ် ယူထားကြသူများတွင် အသိတရားရှိသူ ခေတ်ပညာတတ်များ၊ စီးပွားရေးလူမှုရေး ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေကြသူများပင် အမြောက်အမြား ပါဝင်နေသည်ကို လက်တွေ့ကြားသိရတော့ သိပ်မထူးဆန်းမိတော့။ ဗမာပြည်သူပြည်သားများက ယုံလွယ်သည်ကို အခွင့်ကောင်းယူလျက် ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြားရစေခြင်းဖြင့်နှလုံးသားထဲ အသိတရားထဲ နက်နက်နဲနဲတိုင်အောင် လိုသလို ပုံသွင်းခံခဲ့ကြရရှာလေပြီ။ ဘာသာခြားနှင့်လက်ထပ်သူ မွတ်စလင်မ် အနည်းငယ် တွေ့ကြုံကြားသိရတော့လည်း ထိုသူတို့၏မှိုင်းတိုက်မှုကို သံသယ ပါးပါးလေးပင်မဝင်မိတော့ဘဲဤအတိုင်းသာ ရာနှုန်းပြည့် အမှန်ဖြစ်ရမည်ဟု တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်လိုက်ကြသည်။ ထို့အတွက် အစ္စလာမ်က လမ်းညွှန်ထားသော အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းကိုရှင်းပြလိုပါသည်။
(“၇၈၆” အကြောင်းတော့ အခြားနေရာများတွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းထားကြပြီးဖြစ်ရာထပ်မံမပြောလိုတော့။ မသိသေးသူ ဖတ်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်လျက် အောက်ခြေတွင် link ပေးထားပါမည်။)
အစ္စလာမ့်ဘဝတည်ဆောက်မှုလမ်းစဉ်၏ သွန်သင်ချက်အရထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းသည် မလုပ်မနေရတာဝန်တစ်ရပ် မဟုတ်သော်လည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ပါသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမှတဆင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်း၊ အပြန်အလှန် တာဝန်ယူမှုနှင့်ကာကွယ်မှု ရယူပေးဝေနိုင်စေခြင်း၊ ရောင့်ရဲနှစ်သိမ့်တတ်ခြင်း၊ စိတ်နှင့်ဝိဥာဉ်အတွက် အင်အား၏အရင်းအမြစ်တစ်ရပ်ရစေခြင်း၊ သန့်စင်သောမျိုဆက် တည်ထောင်နိုင်ခြင်း စသည့် ကောင်းကျိုးများရနိုင်စေသည်ဟုရှုမြင်ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်ဝသူတို့အားလူပျိုအပျိုများကိုသာမက အိမ်ထောင်ကွဲများ၊ မုဆိုးဖိုမုဆိုးမများကိုပင် အိမ်ထောင်သစ်ပြုကြရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်။ (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂း၁၈၇၊ ၄း၂၄-၂၅၊ ၇း၁၈၉၊ ၃၀း၂၁၊ ၄း၃၊ ၂၄း၃၂)
အစ္စလာမ်တွင် ဘုန်းကြီးစနစ်မရှိသောကြောင့်လူသားတိုင်း အိမ်ထောင်ပြုခွင့်ရှိပြီး မဟာလူသား ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ အားလုံးသည်လည်း မိခင်ဝမ်းကြာတိုက်မှတစ်ဆင့်ပွင့်ပေါ်ရောက်ရှိခဲ့ရသည့်အတွက် သားအိမ်ရှင်မိခင်တို့၏ အဆင့်အတန်းနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်ကိုတန်ဖိုးထားပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းရာကောင်းကျိုးဖြစ်ရာ မိသားစုများ ပူးပေါင်း၍ လောကကို အလှဆင်ကြစေရန်အတွက် ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုကြောင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်မှုကို သွေးသားအရ ဆွေမျိုးတော်စပ်မှုကဲ့သို့ပင် အလေးထားရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။(ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂၅း၅၄)
(ကိုးကား – နိကာဟ် အစ္စလာမ့်ထိမ်းမြားခြင်း – အလ်ဟာဂ်ျမုဖ်သီ ဒေါက်တာ မြင့်သိန်း)
ဆိုလိုသည်ကား အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည်သက်ဆိုင်သူ နှစ်ဦးနှစ်ယောက်တည်းအရေးမဟုတ်ဘဲ ဆွေမျိုးသားခြင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်ပူးပေါင်းသည့်အရေးဟု ရှုမြင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆွေမျိုးစုနှစ်စု တစ်စည်းတစ်ပေါင်းတည်းစုပေါင်းနိုင်ရေး အခြေခံလမ်းညွှန်များ ချမှတ်ပေးထားပါသည်။
အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း မင်္ဂလာအထမြောက်ရန်
၂)ခင်ပွန်းမှ ဇနီးသည်သို့ မင်္ဂလာဦးလက်ဆောင် ပေးရပါမည်။
၃)အသိသက်သေ အနည်းဆုံးနှစ်ဦး ရှိရပါမည်။
၁)ကာယကံရှင်ဆန္ဒမပါဘဲ အဓမ္မ လက်ထပ်ခွင့်မရှိပါ။
၃) နှစ်ဦးသဘောတူ ကြည်ဖြူရုံ သက်သက်ဖြင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲတိတ်တဆိတ်ပေါင်းသင်းခွင့်မရှိပါ။ အမျိုးသမီးတို့အတွက် အခွင့်အရေးများ ဖြစ်ပါသည်။
လူပြောများသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ အစ္စလာမ်ကမယားလေးယောက် ယူခွင့်ပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ထိုသည်နှင့် သက်ဆိုင်သောကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်လာ သွန်သင်ချက်ကို ဖော်ပြပါမည်။
“အသင်တို့သည် ဖမဲ့မိန်းကလေးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားမျှတမှုမရှိမည်ကို စိုးရိမ်ကြသော် မိမိတို့နှစ်သက်ရာ အမျိုးသမီးများအနက် နှစ်ဦးဖြစ်စေ၊ သုံးဦးဖြစ်စေ၊လေးဦးဖြစ်စေ ထိမ်းမြားကြလေကုန်။ ထိုသို့ထိမ်းမြားရာတွင် တရားမျှတမှု ပြုနိုင်ကြမည်မဟုတ်ဟုစိုးရိမ်မကင်းသော် တစ်ဦးတည်းကိုသာ လက်ထပ်ကြကုန်” (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၄း၃)
ဤသွန်သင်ချက်၏ အလိုသဘောမှာ မလုပ်မနေရ တိုက်တွန်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက လေးဦးအထိ အများဆုံး အိမ်ထောင်ပြုပိုင်ခွင့်အား ခွင့်ပြုပေးထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာ စတင်ထွန်းကားစဉ်က မွတ်စလင်မ်တို့အားကျန်အာရဗ်များက နည်းမျိုးစုံဖြင့် နှိပ်စက်စော်ကားသည်ဖြစ်ရာ နောက်ဆုံး မတတ်သာသည့် အဆုံးတွင် ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်လာသူများအား ပြန်လည်ခုခံသည့် ခံစစ် ဆင်နွှဲခဲ့ရလေရာ စစ်ပွဲတို့၏ထုံးစံအတိုင်း စစ်သည်များ အသေအပျောက် ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုကွယ်လွန်သူ စစ်သည်တို့၏ ကျန်ရစ်သူသမီးများ၊မုဆိုးမဇနီးများ၏ အနာဂတ်လုံခြုံရေးအတွက် မွတ်စလင်မ်အမျိုးသားများက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်စေရေး အတွက် ချွင်းချက်အနေဖြင့် ဇနီးလေးဦးအထိ လက်ထပ်ပိုင်ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင်ပင် တရားမျှတမှုကို ရှေ့တန်းတင်ရပါမည်။ နောက်ထပ်လည်း အောက်ပါအတိုင်း သွန်သင်ထားပါသေးသည်။
ထိုမှတစ်ပါးတုံအသင်တို့သည် မည်မျှပင် ဆန္ဒထားရှိကြကုန်သော်လည်း ဇနီးမိန်းမတို့၏စပ်ကြားဝယ် အဖက်ဖက်မှတရား မျှတအောင် ပြုနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ သို့ဖြစ်ပေရာ (ဇနီးမိန်းမတို့အနက်) တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲဘက်သို့ လုံးဝတစ်ဘက်သတ် မယိမ်းယိုင်ကြကုန်လင့်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ဇနီးလေးယောက်အထိ ယူခွင့်ပြုထားခြင်းသည်
(က)မယူမနေရတာဝန်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အခြေအနေတစ်ရပ်အရလိုအပ်ပါက ယူပိုင်ခွင့် ပြုထားခြင်းသာဖြစ်သည်။အချိန်တိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။ “အကယ်၍”ဟူသည်နှင့်အစချီသည့် conditional approval သာ ဖြစ်ပါသည်။
(ခ)အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ လိုအပ်လွန်းသည့်အခြေအနေတွင်တောင် မယား လေးယောက်အထိသာ အများဆုံးယူပိုင်ခွင့်maximum upper limit ရှိပါသည်။ အစ္စလာမ်က ယောက်ျားကောင်း မောင်းမတစ်ထောင်ဆိုသည်မျိုးကိုလုံးဝ ခွင့်မပြုထားပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကြည်ဖြူပါသည်ဆိုလျင်တောင် ကန့်သတ်မှုထက် ပိုပိုင်ခွင့်မရှိပါ။တိတ်တိတ်ပုံး အမြောင်မယားလည်း ထားခွင့်မပြုပါ။ ဤလေးဦးအထိခွင့်ပြုချက်ကို ဝေဖန်သူတို့အား မေးခွန်းတစ်ခုထုတ်လိုပါသည်။ အစ္စလာမ်မှလွဲ၍ကျန် ဘာသာ သာသနာများတွင် ဇနီးမယား အများဆုံးယူပိုင်ခွင့်အရေအတွက် ကန့်သတ်မှု ရှိပါသလား။
(ဂ)ကမ္ဘာ့လူဦးရေအချိုးအစားအရ အမျိုးသမီးဦးရေက အမျိုးသားဦးရေထက် အနည်းငယ်ပိုသော်လည်းမည်သည့်လူ့အစုအဝေးတွင်မှ ကျားမအချိုး ၁း ၄ ရှိမနေပါ။ လေးဦးစီအထိယူချင်ကြပါသည်ဆိုဦးတော့ လက်တွေ့အားဖြင့် ယူ၍မရသည်ကို ဦးနှောက်နည်းနည်းသုံးရုံဖြင့်သိနိုင်ပါသည်။
(ဃ)မိမိတို့ဝန်းကျင်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အများစုအား လေ့လာကြည့်ပါ။ ဇနီးတစ်ဦးထက် ပိုယူထားသောသူမည်မျှရှိပါသနည်း စာရင်းကောက်ကြည့်ပါ။ ချွင်းချက်အားဖြင် အနည်းငယ် ရှိနိုင်သော်လည်းအများစုသည် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးသည်ဆိုသည်ကို စာရှုသူ လက်တွေ့ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။မြန်မာပြည်တွင် သာမက ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင်လည်း အများစုက ဇနီးတစ်ဦးသာ ယူထားကြပါသည်။ Exceptions do not make rules! ချွင်းချက်များကိုကြည့်ကာ ကောက်ချက်မချသင့်ပါ။ အခြားဘာသာဝင်တွင်လည်းမယားတစ်ဦးထက် ပိုယူထားသူ၊ တိတ်တိတ်ပုန်း ကီပင်ထားသူ ရှိပါသည်။ ထိုသူတို့ကိုကြည့်ကာထိုသူတို့ ကိုးကွယ်သည့်သာသနာကို ကောက်ချက်ချ၍ မရပါ။
အထက်ပါအချက်များအရ မွတ်စလင်မ်တို့သည် မယားအများအပြားယူ၊ သားသမီး တစ်ြပုံတစ်ခေါင်းမွေးကာ သားဖောက် သာသနာပြုကြသည်ဆိုခြင်းမှာ အခြေအမြစ်လုံးဝမရှိသည့်စွပ်စွဲချက်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ မွတ်စလင်မ်အမျိုးသားများကဘာသာမတူသူ အမျိုးသမီးများအား သွေးဆောင်လက်ထပ်ကာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အဖြစ် သွတ်သွင်းနေကြသည်ဆိုသည့်စွပ်စွဲချက်ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ ဘာသာမတူလျင် ပေါင်းဖက်ခွင့်လုံးဝမရှိပါ။
“မွတ်ရ်ှရစ်က်(အခြားကိုးကွယ်ရာ၊ အခြားသာသနာကိုကိုးကွယ်သူ) ဘာသာခြား အမျိုးသမီးတို့သည် အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်း မရှိသမျှကာလပတ်လုံး အသင်တို့သည် ထိုအမျိုးသမီးများနှင့် လက်မထပ်ကြကုန်လင့်။ထိုဘာသာခြား အမျိုးသမီးသည် သင်တို့အထင်တွင် နှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်ငြားသော်လည်း ထိုအမျိုးသမီးထက်စာလျင်အစ္စလာမ်ကို ယုံကြည်သော ကျွန်အမျိုးသမီးက မုချ သာပိုကောင်းမွန် သင့်တော်ပေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ဘာသာခြား အမျိုးသားတို့သည် အစ္စလာမ်ကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်း မရှိသမျှကာလပတ်လုံး အသင်တို့သည်ထိုသူများနှင့် မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးများကို လက်ထပ်ထိမ်းမြား မပေးကြကုန်လင့်။ ထိုဘာသာခြားအမျိုးသားသည် သင်တို့အထင်တွင် နှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်ငြားသော်လည်း ထိုအမျိုးသားထက်စာလျင်အစ္စလာမ်ကို ယုံကြည်သော ကျွန်အမျိုးသားက မုချ သာပိုကောင်းမွန် သင့်တော်ပေသည်။” (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၄း၁၂၉)
အထက်ပါဆုံမသြဝါဒတော်အရ မွတ်စလင်မ်တို့အိမ်ထောင်ပြုရန်အတွက်ဘာသာတူ ကျွန်ကပင် ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်း သွန်သင်ထားပြီး ဘာသာမတူက လက်ထပ်ခွင့် မရှိပါ။ဤသြဝါဒတော်လာ သာလွန်မှုဟူသည် မြင့်မြတ်ကောင်းမွန်မှုကိုမဟုတ်ဘဲအိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ပိုမိုသင့်လျော်မှုကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ လူသားအားလုံးသည်တစ်မိတစ်ဖတည်းမှ ဆင်းသက်လာပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားမှာမျိုးနွယ်၊ အသားအရာင်၊ ဇာတိတို့ကို အခြေမခံဘဲ သက္ကဝါခေါ် ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ အမြတ်ဆုံးလူသာဖြစ်ပါသည်။ (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၄၉း၁၃)
အကယ်၍ အဆိုပါ ဘာသာခြားပုဂ္ဂိုလ်သည် တစ်စုံတစ်ရာသွေးဆောင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ မိမိ စိတိဆန္ဒအလျောက် အစ္စလာမ်သာသနာသို့ ပြောင်းလဲသက်ဝင် လက်ခံယုံကြည်လာခြင်းမှအပ ထိုသူနှင့်မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးလက်ဆက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာသို့ ဘာသာပြောင်းခြင်းဆိုသည်ကလည်းနှလုံးသားမှထဲထဲဝင်ဝင် နှစ်နှစ်ကာကာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကာ လက်ခံခြင်းဖြစ်ရပါမည်၊ အိမ်ထောင်ပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မဖြစ်ရပါ။
မည်သည့်ဘာသာ သာသနာတွင်မဆို သာသနာပြုဖိတ်ခေါ်ဖြန့်ချိခြင်း ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တောင်တန်းသာသနာပြုစီမံကိန်းထင်ရှားပါသည်။ ထို့အတွက် မည်သူမဆို မိမိယုံကြည်ရာ၊ မိမိကမှန်သည်ထင်ရာကိုကျန်သူတို့ထံဖိတ်ခေါ်ဖြန့်ချိပိုင်ခွင့် ရှိရမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖိတ်ခေါ်ဖြန့်ချိရန် အစ္စလာမ်ကချမှတ်ထားသောနည်းစနစ်ရှိပါသည်။
“အသိပညာဥာဏ်အလိမ္မာ၊ သာယာလှပသော ဆုံးမစကားဖြင့် အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောသာသနာသို့ဖိတ်ခေါ်ပါလေ။” (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၁၆း၁၂၅)
အထက်ပါညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမှအပ၊အစ္စလာမ်အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြ ကျင့်သုံးဆောက်တည်ပြခြင်းမှတစ်ပါး အခြား အောက်လမ်းနည်းသုံးကာပိုင်းလုံးလုပ်လျက် သာသနာပြုရန် လုံးဝအကြောင်းမရှိပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာတွင် အဓမ္မစနစ်ကို လုံးဝခွင့်မပြုပါ။
“ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောတရားလမ်းစဉ်သည် မမှန်ကန်သောလမ်းစဉ်နှင့် ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာ ကွဲပြားခြားနားလျက် ရှိနေပြီဖြစ်ရာသာသနာရေးတွင် အနိုင့်အထက် အလျဉ်းမပြုရ” (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂း၂၅၆)
ထို့အတွက်ကြောင့် အစ္စလာမ်၏ မည်သည့်နေရာတွင်မှဘာသာမတူသူကို လက်ထပ်ကာ ဘာသာကူးပြောင်းစေရန် ညွှန်ကြားခိုင်းစေထားရန် မဆိုထားဘိ ထိုသို့လုပ်ရန်ကိုပင်လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။ နှလုံးသားမှမပါဘဲ အပေါ်ယံကူးပြောင်းလာမည့် အယောင်ဆောင်လည်း အလိုမရှိပါ။သူတို့ထံမှလည်း အစ္စလာမ့်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ကောင်းကျိုးမဖြစ်နိုင်ပါ။ နှစ်နှစ်ကာကာ ကူးပြောင်းသက်ဝင်ယုံကြည်သူဆိုလျင်မူ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် မျိုးဖောက်သာသနာပြုရန်ဘာသာတရားက ခိုင်းစေထားပါသည်ဆိုကာ အမုန်းမီးပွားစေရန် ဝါဒမှိုင်းတိုက်သည်ကို မှားယွင်းကြောင်းပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပါသည်။ အစ္စလာမ်က ထိုသို့ လုံးဝ မသွန်သင်ထားပါ။
သို့သော် …… သို့သော် …..။
ဝါဒနှင့်ဝါဒီကို ခွဲခြား ရှုမြင်စေလိုပါသည်။သာသနာက ခွင့်မပြုပါ ဆိုထားပါလျက်နှင့် ပိုးဖလံမျိုး မီးကို တိုးကြသူများလည်း အဟုတ်အမှန်ရှိပါသည်။
အိမ်ထောင်ရေး၏ အစသည် နီးစပ်မှုသံယောဇာဉ်တွယ်ငြိမှုဖြစ်ရာ အမြဲအတူ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြရသူ အသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်း ဘာသာရေးအရ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော်လည်းမိမိတို့ကိုယ်ကျိုးဆန္ဒနောက်ကိုလိုက်လျက် ဘာသာမတူသူနှင့် လက်ထပ်ကြသူ မွတ်စလင်မ်များလည်းရှိခဲ့ပါသည် …… ရှိနေပါသည်။ မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်သိရှိသောကြောင့်ရှေ့မဆက်ကြရန် မွတ်စလင်မ် အသိုင်းအဝိုင်းက နည်းမျိုးစုံနှင့် တားမြစ်ကြသော်လည်း မိမိတို့ဆန္ဒနောက်ကို လိုက်ကြသူများလည်းရှိပါသည်။ နောက်ကျပြီးမှ သိလိုက်ကြရသည်တို့လည်း ရှိပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် မိဘနှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းကကြည်ဖြူလက်ခံလိုလှ၍ မဟုတ်သော်လည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်ခံပေးလိုက်ရသည်လည်း ရှိပါသည်။ ထိုနေရာတွင် မွတ်စလင်မ်တစ်ချို့က“ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက် နိကဟ် (အစ္စလာမ့်နည်းကျ ထိမ်းမြားမှု) လုပ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့ …မွတ်စလင်မ်လို လိုက်နေရမယ်” ဟု ဆိုလာခြင်းမှာလည်း ကျွန်တော့်အမြင်အရမူ ဖိနပ်နှင့်မတော်သောကြောင့်ခြေထောက်ဖြတ်သကဲ့သို့သာ ဆိုချင်ပါသည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့ပြီးသော ကိစ္စရပ်အတွက် ရေရှည်စိတ်ဆင်းရဲကြရခြင်းမှလွဲ၍အဖြေမရှိပါ။
သေချာပါသည်။ မည်သည့်မွတ်စလင်မ် မိဘဆွေမျိုး၊ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ကမှ ထိုသို့သော မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူနှင့် လက်ထပ်ခြင်းကို အားပေးအားမြှောက်မပြုပါ။ဘာသာမတူသူ တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီး၏ အဆင့်အတန်းအလိုက် ထောက်ပံ့ဆုကြေးများကို ဗလီများမှတဆင့်ချီးမြှင့်သည် ဆိုလာခြင်းကိုမူ ပျက်လုံးတစ်ခုအနေဖြင့်သာ ရယ်လိုက်ချင်ပါတော့သည်။ သက်သေပြပါဟုသာပြန်မေးချင်ပါသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ အစ္စလာမ့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဗလီများတွင် ထိုမျှလောက်ငွေပိုလည်း ရှိမနေပါ။ ဘာသာခြားနှင့်ိမ်ထောင်ပြုထားပြီး မွဲတေနေသူမွတ်စလင်မ်တို့ကိုလည်းမြင်နေရပါသည်။ ဝါဒဖြန့်စာစဉ်များတွင် ပါသည့် မွတ်စလင်မ်တို့၏ လျှို့ဝှက်ဖြန့်ဝေစာ ဆိုသည်မှာလည်းအမှန်တကယ်မရှိသည့်၊ မွတ်စလင်မ်စစ်စစ်တို့က ရေးသားခြင်းမဟုတ်သည့် လုပ်ကြံစာသာ ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာကို ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နှင့်တမန်တော် မုဟမ္မဒ်၏ စစ်မှန်ခိုင်လုံသော သြဝါဒတော်များကသာ ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ထိုသည်တို့တွင်အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်မျိုး အရိပ်အငွေ့ပင် မပါရှိပါ။
တကယ်တမ်း လေ့လာကြည့်ပါက ဘာသာခြားနှင့်အိမ်ထောင်ပြုသွားသူများတွင် မွတ်စလင်မ်အမျိုးသားများနည်းတူ မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးများလည်းအမြောက်အများ ပါ ပါသည်။ စာရှုသူလည်း တွေ့ဖူးပါလိမ့်မည်။ စိုးရိမ်နေကြရသည့်သူများတွင်မွတ်စလင်မ်မိဘများကလည်း ထိပ်ဆုံးက ရှိနေရပါသည်။ ဘာသာခြားနှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ နောက်ဆုံးတွင်ထိုဘာသာဘက်သို့ ကူးပြောင်းသွားကြသော မွတ်စလင်မ်များလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။ သို့သော် သူတို့နှင့်စပ်လျဉ်းလျင်မူဝါဒမှိုင်းတိုက်ဆရာတို့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြပါသည်လား။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ အများစုသော မွတ်စလင်မ်တို့သည်ကားဘာသာတူသူ အချင်းချင်းသာ လက်ထပ်ကြသည်ကိုလည်း မိတ်ဆွေတို့ လက်တစ်ကမ်းရှိသူများကို လေ့လာရုံနှင့်ပင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။ ပမာဏနည်းလှသော လူအချို့ကို မီးမောင်းထိုး highlight လုပ်ကာ လိုရာ ခြောက်လှန့်ဝါဒဖြန့်ကြလျက် အမုန်းတရား ပုံဖော်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းလုံးဝမဟုတ်ပါ …. ခုရှင်းမှသာ နောင်ရှင်းပါမည်။ ဘာသာမတူသော အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုသည်မိတ်ဆွေအဖြစ် လက်တွဲနိုင်သော်လည်း “အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်” လေရာ ရာသက်ပန် ရိုးမြေကျဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းများကပါ ပါဝင်သည့် ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်ကတော့ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ပါ။ထို့အတွက်ကြောင့် မည်သည့်ဘာသာ သာသနာအနေနှင့်မဆို မိမိတို့ သာသနာဝင်များအား ဘာသာမတူသူနှင့်လက်ထပ်ခြင်း မပြုကြရန် တိုက်တွန်းကြခြင်းအား ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါသည်။ ဘာသာတိုင်းအနေဖြင့်ယခုထက်ပင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုက်တွန်းကြရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ပါသည်။
သို့သော် ဤအကြောင်းချင်းရာကို ဆုံးမသွန်သင်ရာတွင် ဘာသာခြားနှင့် လက်ဆက်ခြင်းကြောင့်ရေရှည် အဆင်မပြေ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို အဓိက မပြောဘဲ အခြားဘာသာတရားတစ်ခုအား အခြေမမြစ်မရှိပုတ်ခတ်စွပ်စွဲ အမုန်းပွား အထင်အမြင်လွဲစေမည့် အကြောင်းချင်းရာများကိုမူ ရှောင်ရှားအပ်ပါကြောင်းယုံကြည်ပါသည်။
ယခုနှစ်သစ်ခါသမယမှစတင်ကာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော၊ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးကြသော ပဋိပက္ခကင်းသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ် မြင်ချင်လှပါသည်။ လက်တွေ့ဖြစ်လာစေရန် ကျွန်တော်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ နောင်မျိုးဆက်တွင်အမုန်းတရားများ မကျန်စေလိုတော့ပါ။ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ကြိုးပမ်းကြပါဦးစို့။
Tags: featured, QandA, မမေးလည်းဖြေ